Maitiro ekutibvunza isu usati wabvisa email | IPhone nhau
Maitiro ekutibvunza isu usati wabvisa email muTsamba
Kuongorora email yedu chinhu chinoitwa nevashandisi vazhinji nguva zhinji mukati mezuva. Kudzima (kana kuchengetera) email muIOS kuri nyore, zvakareruka, nekuti zvinongofanirwa kuti tibate marara icon, ayo anogona dzimwe nguva kukonzera ngatidzimei email izvo zvataida chaizvo kuchengeta. Kana isu tichida kudzivirira kushamisika kusingafadzi, inogona kunge iri zano rakanaka kuita a sarudzo iyo ichaita kuti iwe utibvunze isu kana isu tichida kudzima (kana kuchengetedza) meseji usati waita chiito. Kufanana nemamwe mabasa mazhinji kana maficha muIOS, maitiro akareruka, asi iwe unofanirwa kuziva kuti iripo kugona kuzviita, zvine musoro. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa chete kuita anotevera matanho.
Isu tinovhura iyo Zvirongwa kubva ku iPhone yedu, iPod kana iPad.
Tiri kuenda Tsamba, vanobata, calend.
Shandisai chisarudzo Bvunza kana uchibvisa. Shanduko ichave ipapo ipapo.
Zvinoita sekukosha kutaura izvozvo tichazobvunzwa chete kana tichida kudzima tsamba hongu isu tinobata pane iyo marara icon. MuIOS 9 tinogona kudzima maemail nekutsvedza kuruboshwe tichiita rwendo rurefu. Kana tikazviita nenzira iyi, tsamba dzinobviswa pasina kubvunza isu uye pasina chero rudzi rwechiziviso. Iyi sarudzo inofanirwa kunge iri yekudzivirira tsaona uye zvakare inofungidzirwa kuti kana tikabata chiwonesi chizere chekusvetukira kuruboshwe, tinozviita nemaune, saka sisitimu inonzwisisa kuti haisi tsaona uye inoita chiito zvakananga.
Mune mawonero angu, iyi sarudzo inofanirwa kuve inogoneswa nekukasira kuitira kumwe kuchengetedzeka. Isu tinofanirwa kuve vashandisi vane masimba mazhinji pamusoro pezvinhu izvi zvatinoita kuti zvibvise "Bvunza kana uchibvisa" kana tichida. Apple inogona kuisiya yakaremara kuti ive nyore, asi chengetedzo inogara iri nani pane nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekutibvunza isu usati wabvisa email muTsamba
Inonyanya kubatsira. Ndatenda
Pindura kuna sam
Ndakazviedza asi hazvishande pane zvandiri kuda. Ini ndinotsanangura:
Ngatitii ndinoda kumaka email sekuverengwa kana kuiendesa kune imwe folda
-Mukunyora tsamba, ini ndinotsvedza kuruboshwe kuti ndipe dzimwe sarudzo dzakatarwa ne ellipsis […]
-Iyo tsamba inodzimwa nekuti ndatsvedza zvakanyanya.Kana ndikasatsvedza zvakakwana, inodzokera panzvimbo yekutanga.
Pfungwa, kana ukasatsvedza zvachose, inofanira kugara pakati, ichiratidza mabhatani […] nemarara emarara, asi haibude.
Zvisineyi ini ndakaedza kushandisa kuraira kuri muchinyorwa chino asi hazvibvunze pandinodzima nenzira iyi.
Mumwe munhu zvinoitika?
Mimoji, wedzera "Favorites" tab ku emoji yako [Jailbreak]
Bvunzo nyowani dzinoratidza kungangoita kuzvimiririra muiyo iPhone 6s ine A9 kubva kuTSMC uye Samsung